Home Wararka Howlgalka Atlanta oo 10-sano jirsaday
Howgalka ka hortaga burcad badeeda Soomaalida ee Atlanta oo ay Midowga Yurub iyo saaxiibadooda ka wadaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha ku dhaw dhaw ayaa toban jirsaday.
Midowga Yurub ayaa howlgalka Atlanta xeebaha Soomaaliya ka bilaabay 8’dii bishii December 2008, xiligaasi oo ay u arkayeen burcad badeeda Soomaaliyeed halis caalami ah, oo ay tahay in si wadajir ah looga hortago.
Madaxweyne ku xigeenka Midowga Yururb Federica Mogherini ayaa munaasabad loogu dabaal dagaayay toban sano guuradii kasoo wareegatay markii la bilaabay howgalka Atlanta, cod dheer kaga sheegtay in howlgalkaasi uu yahay mid lagu guuleysatay oo danaha loo bilaabay wax badan oo kamid ah laga gun gaaray.
Waxaa yaraaday dhaqdhaaqyadii tirada badnaa ee burcad badeeda Soomaalida sida loo bilaabay hwolgalkaasi iyadoo laga soo furtay ajaanib farabadan oo ay lacago madax furasho ah dul dhigeen.
“Waxaan u mahadcelinayaa wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ah ee qeybta ka ah howlgalka Atlanta, waxaana u sheegayaa in wax wanaagsan ay qabteyn, taariikhdana ay xusi doonto” ayey sheegtay Mogherini .
Hase ahaatee waxaa Midowga Yurub lagu dhaliilaa in aynan ka go’neyn nabadeynta xeebaha Soomaaliya, oo ay dano kale wataan, maadama aynan ahmiyad siinin in ay Dowladda Soomaaliya ka taageeraan dhisida ciidamo bad oo ay Soomaaliya yeelato.
Previous articleShacabka oo dhibaato xoogan ku qabo Waaxda Socdaalka (immigration)
Next articleMasharaxiinta K/Galbeed oo digniin loo jeediyay
Gud. Mudug ee Puntland oo si kulul ugu jawaabay Odayaashii Beesha...
Somaliland si ay ictiraaf u hesho biloowday olole ay kuwadato Musharax...